Fa maninona no maty ny efijery iPhone ataoko rehefa miantso aho? | Vaovao IPhone
Fa maninona no maty ny efijery iPhone ataoko rehefa miantso aho?
Pablo Aparicio | | Fampianarana sy torolàlana
Azo inoana fa maro ny mpamaky News iPhone no ho gaga amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, saingy tsy inona izany fa ny fangatahana izay nanontanianao anay tamin'ny fotoana samihafa. Fa maninona ny Vonoiko ny efijery iPhone ataoko rehefa miantso aho? Ara-dalàna ve izany fihetsika izany? Amin'ny voalohany ny valiny dia eny, fa miankina ihany koa amin'ny fotoana hijanonany sy raha afaka miditra amin'ireo asan'ny iPhone isika rehefa mila izany.
Toy izao manaraka izao ny fihetsiky ny iPhone: ny finday avoakan'i Apple, toy ny Nokia 7650 tamin'ny 2002, dia manana iray na roa sensor akaiky (arakaraka ny maodely) eo amin'ny tapany ambony amin'ny takelaka eo anoloana izay miasa indrindra hamantarana rehefa manana izany amin'ny tarehintsika isika. Amin'izany fomba izany, rehefa miantso na miantso antsika isika ary mitondra azy eo an-tsofintsika, dia ho faty ny efijery iPhone (satria tsy ilaina izany) hamonjy bateria. Rehefa esorintsika amin'ny masontsika / sofintsika ny iPhone dia hampiseho ny interface misy azy toy ny mahazatra azy io. Tonga ny olana rehefa, rehefa esorinay hiala amin'ny tarehintsika ny iPhone miaraka amin'ny antso mbola mandeha, sary mainty ihany no hitantsika.
Inona no hatao raha tsy ho velona ny efijery iPhone mandritra ny antso iray
Araka ny efa nohazavainay dia tsy hirehitra ny efijery iPhone raha toa ka manana ny fitaovana voafatotra amin'ilay efijery isika satria handany bateria. Fa rehefa esorintsika hiala amin'ny tarehintsika ny iPhone dia manao isika tokony ho hitantsika ny interface izay ny app Phone aseho mandritra ny antso iray, zavatra toy ny asehon'ity sary manaraka ity:
Ity no hitantsika, ohatra, rehefa miantso mpandraharaha an-telefaona isika, robot no mamaly antsika ary mangataka antsika hanery nomerao iray hanohizana. Raha miatrika an'ity fieritreretana ity isika, ny zavatra tsy maintsy hataontsika dia ny manalavitra ny iPhone amin'ny tarehintsika, kitiho ny bokotra "Keyboard" ary kitiho ny isan'ny safidy tadiavina. Fa raha ny fahazoantsika vaovao hafa amin'ny telefaona no tadiavinay, toy ny fangatahana naoty, ny fandaharam-potoana na ny kalsoreora, ny tsy maintsy hataontsika dia ny bokotra fanombohana tsindrio, izay, toy ny mahazatra, dia hitondra antsika any amin'ny solaitrabe ary afaka manao na inona na inona isika, tsy misy manantona ny antso. Angamba amin'ity tranga ity dia mahaliana ny mampihetsika ny fanamafisam-peo aloha (tsy misy tanana). Toa zava-dehibe ny milaza fa raha mandritra ny antso dia miditra amin'ny efijery an-trano na rindranasa hafa izahay, dia ho hitantsika ny bara maitso manondro fa misy antso eo am-piandohana.
Saingy, mazava ho azy, ity lahatsoratra ity dia momba ny fiheverana fa tsy mandeha ny efijery iPhone rehefa manao antso na manao antso isika. Raha tsy mandeha izany dia inona no mitranga? Misy vitsivitsy azo atao:
Maloto ny sensor sensor akaiky. Ny zavatra tsara indrindra mety hitranga dia ny fisian'ny zavatra manarona ny sensor akaiky na sensor ary misy zavatra maloto kely. Ny vahaolana amin'ity tranga ity dia ny fanadiovana ny alohan'ny iPhone, amin'ny fanamafisana manokana ny ampahany misy ny headset satria ireo sensor eo akaiky eo dia eo amin'io faritra io.
Sarona manarona ny sensor akaiky. Tena mitovy amin'ny teboka teo aloha, fa miaraka amin'ny olana fa tsy hamaha ny lesoka izahay amin'ny fanadiovana ny faritra. Ny zavatra tsy maintsy hataontsika raha hanamarina raha izany no mitranga amin'ny iPhone dia ny manao antso tsy misy ilay tranga ary hahitana raha ho velona na tsia ny efijery an'ny iPhone, lojika raha miaro ny telefaonintsika amin'ny tranga iray isika. Raha mirehitra izany dia efa fantatsika fa ny olana dia ny tranga ary ny vahaolana dia ny fampiasana iray hafa na manova ilay efa ananantsika mba tsy hosaronan'ny sensor. Raha tsy maivana izany dia tsy maintsy hitady ny olana any an-kafa isika.
Olana amin'ny lozisialy. Ny olana sedrainay amin'ny fitaovana misy ny rafitra miasa dia mety olana amin'ny lozisialy. Ny fomba haingana indrindra hamahana ny olan'ny rindranasa mety amin'ny fitaovana iOS dia ny fanerena ny famerenana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra fanombohana (ny bokotra ambany ambany avy amin'ny iPhone 7 / Plus) ary ny bokotra miala mandra-pahitanao ny paoma. Raha tsy manamboatra ny olantsika ny fanerena ny famerenana amin'ny laoniny, ny zavatra manaraka azontsika atao dia ny famerenana amin'ny laoniny ny iPhone. Raha mbola eo ny olana amin'ny fametrahana madio ny rafitra miasa dia miroso amin'ny teboka manaraka isika.
Olana amin'ny hardware. Midika izany, raha lazaina haingana, fa tapaka ny iPhone. Ny tsara indrindra azontsika atao amin'ity tranga ity dia ny mifandray amin'i Apple ary asaivo omen'izy ireo vahaolana izahay, izay mety ho tafiditra ao anatin'izany ny fanomezana trano omena alalana antsika ahafahantsika maka ny iPhone hanamboaranay azy. Raha mbola manana fiantohana ilay fitaovana ary ento any amin'ny Apple Store isika, dia azo inoana fa hatakalo vaovao izy ireo.
Efa namboarinao ve ny olan'ny iPhone-nao miaraka amin'ireo sensor akaiky anao rehefa miantso ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Fa maninona no maty ny efijery iPhone ataoko rehefa miantso aho?
Lalao sy fampiharana 7 maimaimpoana na misy fihenam-bidy betsaka mba hanombohana ny herinandro ho fanombohana tsara (16 Janoary)
Tehirizo 8 euro ny tenanao amin'ny fisintomana ireo rindranasa 3 maimaimpoana ireo mandritra ny fotoana voafetra